Fisaorana dia antenaina hiakatra amin'ny mpandeha 20 tapitrisa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Fisaorana dia antenaina hiakatra amin'ny mpandeha 20 tapitrisa
Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Miomàna amin'ny dia amin'ny Thanksgiving
Ny United States Transportation Security Administration (TSA) dia nijery ny isan'ny mpandeha be indrindra tao anatin'ny iray andro tamin'ny herinandro lasa hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina. Miandrandra fe-potoana fitsangantsanganana tena sahirana izy ireo, izay heverina ny 19 Novambra ka hatramin'ny 28 Novambra.
Tsa Nitatitra fa ampy ny mpiasan'izy ireo mba hikarakarana ireo mpandeha 20 tapitrisa andrasana izay handeha amin'ny alàlan'ny toeram-piarovana azy ireo mandritra ny fotoana voafaritra. Ny andro fitsangatsanganana ambony indrindra teo amin'ny tantaran'ny TSA dia ny alahady taorian'ny Thanksgiving tamin'ny taona 2019 talohan'ny areti-mifindra. Nandritra izany fotoana izany, mpandeha 2.9 tapitrisa no nojeren'ny mpiasan'ny TSA.
Ny andro be atao matetika amin'ny Fitsangatsanganana Thanksgiving dia ny Talata sy Alarobia alohan'ny Thanksgiving amin'ny Alakamisy sy ny Alahady aorian'ny Thanksgiving.
Ny mpitantana ny TSA David Pekoske dia nilaza hoe: "Manantena izahay fa mety ho akaiky ny haavon'ny pre-pandemic amin'ity fialantsasatra ity ny dia, ary misy mpiasa sy voaomana ho an'ireo mpandeha amin'ny fialantsasatra. Nametraka teknolojia manatsara ny fahaiza-misaroka sy mampihena ny fifandraisana ara-batana izahay, ary zava-dehibe ihany koa ny fiomanana ny mpandeha miaraka amin'ny toro-hevitra momba ny dia ho an'ny traikefan'ny toeram-pisavana mahomby indrindra. Miaraka amin'ny fihatsaran'ny tahan'ny vaksiny amin'ny ankapobeny manerana ny firenena sy ny fahatokisana bebe kokoa amin'ny dia ara-pahasalamana, dia ho betsaka kokoa ny olona handeha ka miomàna mialoha, ho mailo hatrany ary hampihatra hatsaram-panahy.
"Mamporisika ny mpandeha aho mba handinika ny torolalana omen'ny mpiasan'ny TSA eo amin'ny toeram-pisavana. Mety hitarika anao amin'ny tsipika fohy kokoa izy ireo na hitarika anao amin'ny olona iray izay mihetsika miadana. Ary mety hanome torohevitra anao izy ireo izay hampihena ny mety hilainao pat-down. ”
Ny TSA dia manoro hevitra ny mpandeha hamela fotoana fanampiny amin'ny fitsangatsanganana fialantsasatra ary tonga aloha kokoa noho ny mahazatra. Manome ireto torohevitra ireto ihany koa izy ireo:
Ny mpandeha, ny mpiasan'ny TSA ary ny mpiasan'ny sidina hafa dia tsy maintsy manao saron-tava araka ny voalazan'ny baikon'ny saron-tava federaly. Tsy maintsy manao saron-tava ny olona rehetra ao amin'ny seranam-piaramanidina, fiara fitateram-bahoaka ary gara, amin'ny fiaramanidina mpandeha, fitateram-bahoaka, lalamby mpandeha, ary fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'ny lalana raikitra voalahatra. Raha tsy nitondra saron-tava ny mpandeha iray, dia hanolotra saron-tava ho an'io olona io ny tompon'andraikitra TSA eo amin'ny toeram-pisavana.
Miomàna amin'ny fiarovana rehefa manangona ary ataovy izay hahazoana antoka fa tsy misy entana voarara ao anaty entana. Fantaro hoe inona no sakafo tokony hiditra ao anaty kitapo voamarika. Ny gravy, ny saosy cranberry, ny divay, ny jam, ary ny voatahiry dia tokony hiditra ao anaty kitapo voamarika, satria tsy mafy izy ireo. Raha azonao raraka, afafazo, apetaho, paompy na arotsaka, dia tsy mafy orina ilay izy ka tokony hapetraka ao anaty kitapo voamarika. Toy ny mahazatra dia afaka mitondra sakafo mivaingana toy ny mofomamy sy mofo hafa amin’ny alalan’ny fisavana ny mpandeha.
Tsy maninona ny mitondra fanasan-tànana. Ny TSA amin'izao fotoana izao dia mamela ny mpandeha hitondra kaontenera mpanadio tanana ranoka hatramin'ny 12 ounces isaky ny mpandeha amin'ny kitapo entina mandra-pahafatiny. Ny mpandeha dia afaka manantena fa ny kaontenera rehetra lehibe kokoa 3.4 ounces dia mila sivana misaraka, izay hanampy fotoana kely amin'ny traikefan'izy ireo. Ny mpandeha ihany koa dia avela hitondra famafazana misy alikaola na famafana miady amin'ny bakteria amin'ny entana entin-tanana, na entana voamarina, na izy roa.
Misoratra anarana na manavao ny maha-mpikambana anao TSA PreCheck®
Ireo olona nahazo TSA PreCheck dimy taona lasa izay dia afaka manavao ny maha-mpikambana azy amin'ny Internet amin'ny fihenam-bidy. Ny olona tsy manana TSA PreCheck dia tokony hisoratra anarana izao mba hahazoana tombony amin'ny TSA PreCheck, azo alaina amin'ny seranam-piaramanidina 200 mahery any Etazonia. Tsy mila manala kiraro, solosaina finday, ranon-javatra, fehin-kibo ary palitao maivana ireo mpandeha misoratra anarana amin'ny fandaharan'asa azo itokisana, toa an'i TSA PreCheck. Ny maha-mpikambana TSA PreCheck dia sarobidy kokoa ankehitriny noho ny teo aloha satria mampihena ny fifantohana mandritra ny areti-mifindra ary mametraka ny mpandeha amin'ny tsipika fiarovana izay vitsy kokoa ny mpandeha ary mihetsika haingana kokoa, izay mandrisika ny fanalavirana ny fiaraha-monina. Raha te hahita ny programa mpitsangatsangana azo itokisana izay mifanaraka indrindra amin'ny filanao dia, ampiasao ny fitaovana fampitahana mpandeha azo itokisana DHS.
Mangataka fanohanana mpandeha
Ny mpandeha na ny fianakavian'ny mpandeha manana fahasembanana sy/na ny toe-pahasalamana dia afaka miantso ny antso an-tariby TSA Cares maimaim-poana amin'ny 855-787-2227 farafahakeliny 72 ora alohan'ny handehanana amin'ny fanontaniana momba ny politikan'ny fitiliana, ny fomba fiasa ary ny hahafantarana ny zavatra andrasana amin'ny fiaramanidina. toeram-pisavana. Ny TSA Cares koa dia mandamina fanampiana eo amin'ny toeram-pisavana.
Valio ny fanontanianao alohan'ny handehananao any amin'ny seranam-piaramanidina
Anontanio ny TSA. Afaka mahazo fanampiana amin'ny fotoana tena izy ireo mpandeha amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fanontaniany sy ny fanehoan-kevitr'izy ireo amin'ny @AskTSA ao amin'ny Twitter na Facebook Messenger. Ny mpandeha dia afaka manatona ny TSA Contact Center amin'ny 866-289-9673. Ny mpiasa dia misy amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 11 alina amin'ny andro fiasana ary amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 8 alina amin'ny faran'ny herinandro / fialan-tsasatra; ary misy serivisy mandeha ho azy 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro.
Ataovy azo antoka fa manana ID mety ianao
Alohan'ny handehanana any amin'ny seranam-piaramanidina, ny mpandeha dia tokony ho azo antoka fa manana famantarana azo ekena izy ireo. Dingana iray manan-danja amin'ny fizotran'ny sivana fiarovana ny fanamarinana ny maha-izy azy.
Aoka ho mailo hatrany
Raha tsiahivina, ny fahatsiarovan-tena ho an'ny daholobe dia zava-dehibe amin'ny fanohanana ny ezaka fiarovana ataon'ny TSA. Entanina ny mpanao dia lavitra hitatitra hetsika mampiahiahy, ary tadidio hoe: Raha Hitanao zavatra, Lazao zavatra ™.